President of Myanmar has appointed U Myint Lwin, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Turkey – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
President of Myanmar has appointed U Myint Lwin, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Turkey
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Myint Lwin, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Arab Republic of Egypt, concurrently as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Turkey.
Dated. 30 September 2016
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် အီဂျစ်အာရပ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးမြင့်လွင်အား ၄င်း၏လက်ရှိတာဝန်ဝတ္တရားများအပြင် တူရကီသမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ပူးတွဲခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်